Thursday October 11, 2018 - 11:38:52 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Musharraxa xilka madaxtinimada maamulka isku magacaabay Koonfur Galbeed Mukhtaar Rooboow ayaa dhaliilay habacsanaanta kajirta qaabka ay udhacayso doorashada lafilayo.
Rooboow oo iska dhega tiraya diidmadii dowladda Federaalka ay ka muujisay madaxtinimadiisa ayaa Hotellada magaalada Baydhabo ku qabanaya kulamo uu sare ugu qaadayo damaciisa xilka madaxtinimada.
isagoo xildhibaanno iyo siyaasiyiin kula hadlayay Baydhabo ayuu sheegay in wali aan la magacaabin guddigii doorashada maamulka Koonfur Galbeed arrinkaas oo uu sheegay in ay walaac ku abuurayso musharrixiinta.
Wuxuu ku baaqay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo dhiso guddiga doorshada madaxtinimada 'Koonfur Galbeed', wuxuu ku baaqay in lagu dhaqmo dastuurka u degsan maamulka Xabashida Itoobiya hoos taga ee kajira magaalada Baydhabo.
Mukhtaar Rooboow oo durbadiiba qabatimay dhaqamada waxa loogu yeero beesha Caalamka ayaa ku baaqay in aan la hilmaamin wax uu ugu yeeray Xuquuqda dumarku ku leeyihiin maamulka islamarkaana lagusoo daro guddiga ladhisi doono.
Ilo wareedyo laga helay magaalada Baydhabo ayaa sheegaya in ololaha Rooboow ay gacan weyn ka geysanayaan saraakiil ka socota Hay'adaha Q.Midoobe iyo dowladda Itoobiya.
Saraakiisha Taliska ciidamada Itoobiya ee gobollada Bay iyo Bakool ayaa la sheegay in siyaasiyiin deegaanka ah iyo xildhibaanno ay lakulmeen ayna kula taliyeen in ay isbedel ku sameeyaan hoggaanka maamulka 'Koonfur Galbeed' islamarkaana Rooboow lagu tijaabiyo hoggaaminta maamulka Baydhabo.
Halkan ka degso Rooboow oo ka hadlaya arrimaha Doorashada ama Hoos Ka Daawo